Mandehana mankany Krakow, inona no ho hitanao ao an-tanàna | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | tanàna, Krakow, General
Krakow dia renivohitr'i Polonina teo aloha, ary mety tsy anisan'ny toerana avo indrindra any Eropa izy io, saingy azo antoka fa tanàna tsy handiso fanantenana raha te hahita an'i Eropa taloha isika. Tanàna voatahiry tsara izy, miaraka amin'ny basilicas sy fiangonana amin'ny zorony maro ary manana lova ara-javakanto sy kolontsaina lehibe izay ampitaina amin'ireo tsangambato sy habaka misy azy.
Raha mankany mitsidika ny tanànan'i Krakow Misy toerana izay tsy tokony halainao, manomboka amin'ny rindrina taloha ka hatrany amin'ny toerana nisy fotoan-dehibe tamin'ny fotoanan'ny ady, toa ny orinasa Oskar Schindler, mpandraharaha namonjy Jiosy an-jatony tamin'ny Holocaust. Ho fanampin'izany, ho hitanao ny tanàna tsara tarehy handehanana miaraka amin'ny zoro kanto manankarena ara-kolontsaina lehibe.
2 Wawel Castle
3 Katedraly Wawel
5 Basilika any Santa Maria
6 Foiben'ny Gestapo
8 Tobin'i Auschwitz
9 Fitrandrahana sira Wieliczka
Ity no ivon-tanàna be atao indrindra ary koa ny Kianja medieval lehibe indrindra any Eropa. Toerana feno terraces ahafahanao misotro zava-pisotro mangina hijerena ny toetran'ny tanàna, ary toerana iray ihany koa handehananao mitaingina soavaly mitaingina soavaly. Eto amin'ity kianja ity no ahitantsika toerana toa ny Cloth Hall, trano iray izay toy ny ivon-toeram-pivarotana. Eo ihany koa ny Tilikambon'ny lapan'ny tanàna taloha sy ny Basilica any Santa María, izay horesahintsika avy eo.
Ity dia tandindon'ny tanàna, ny trano mimanda izay eo amin'ny havoanan'i Wawel, eo amoron'ny Vistula. Trano izay malalaka be ny fitsidihany, ary avy any amin'ny tranombakoka katedraly ka hatrany amin'ny zohy an'ny Dragon. Na ny Katedraly Wawel aza.
Ny Katedraly Wawel dia anisan'ny trano fivavahana lehibe indrindra avy ao an-tanàna, ary ao amin'ny kompania Wawel Castle no misy azy. Tokony hojerena izany, miaraka amin'ireo toerana toa ny Crypt na lakolosy Sigismund lehibe. Ataovy ao an-tsaina fa manana ora fisokafana sy vidiny izy.
Raha liana amin'ny tantaran'ny Nazia ianao dia azo antoka fa efa nandre momba an'i Oskar Schindler ianao, satria efa nisy sarimihetsika momba azy koa. Mpandraharaha iray izay nampiasa ny fitaomany hanampiana ny Jiosy maro tsy ho faty. Ny ozinina vilany taloha ary ilay orinasan-tsambo dia lasa a tranombakoka misy fampirantiana maharitra mba hahafantarantsika bebe kokoa ny Poloney amin'ny tontolon'ny Nazi.
Basilika any Santa Maria
Ity basilica ity dia miorina amin'ny iray amin'ireo zoron'ny kianjan'ny tsena malaza, eo afovoan-tanàna. Naorina tao amin'ny Taonjato faha-XNUMX amin'ny fomban'ny Gothic. Manana tilikambo roa eo amin'ny endriny izy roa, samy hafa ny iray, ary ny iray avo kokoa noho ilay iray hafa. Amin'ny fahavaratra mandritra ny fitsidihana dia afaka mianika ireo tilikambo ianao mba hahitanao ny fahitana ny tanàna. Ao anatiny koa dia azo atao ny mankafy alitara hazo taloha tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Nandritra ny Ady lehibe II, ao amin'ny laharana faharoa arabe Pomorska Io no nananganana ny foiben'ny Gestapo. Androany isika dia afaka mahita fampirantiana maharitra miaraka amin'ny fisie, sary ary zavatra izay manampy antsika haka sary an-tsaina ilay fotoana fampihorohoroana nitranga tao an-tanàna nandritra ny fitondran'ny Nazia.
Manintona be eto an-tanàna izany, ary isaky ny dimy minitra ny sarivongana dragona vy vita amin'ny afo amin'ny vava. Eo ity sarivongana ity satria misolo tena ny dragona Wawel, angano taloha ao an-tanàna. Ny tranon'ny dragona taloha dia azo idirana amin'ny lavadrano sy mandritra ny volana fahavaratra. Ny fivoahana dia eo amin'ny toeran'ny sarivongana. Raha ny angano dia nesorin'ny tanàna ilay dragona noho ny hevitry ny mpanao kiraro.
Este toby fitanana Io no lehibe indrindra ary tsy isalasalana fa ny malaza indrindra tamin'ireo nanorim-ponenana tamin'ny vanim-potoana nazia. Any amin'ny 70 kilometatra miala ny tanànan'i Krakow no misy azy saingy tsy isalasalana fa fitsidihana saika voatery raha toa ka liana amin'ny tantaran'ny tanàna isika. Fitsidihana goavambe ity, izay ahitanao ny trano fonenan'ireo gadra, ny lavarangana na ny fandoroana faty nandoroana azy ireo. Ny fitsangatsanganana dia azo asiana boky miaraka amin'ny mpitari-dalana amin'ny teny Espaniôla hahafantarana amin'ny antsipiriany ny zavatra niainan'ity toby fitanana ity.
Fitrandrahana sira Wieliczka
Ireto toeram-pitrandrahana masira ireto dia anisan'ny tranainy indrindra eto an-tany ary efa niasa hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Fitsidihana malaza be any Polonina ity, ary tena miavaka ireo toeram-pitrandrahana ireo. Ny fitsangatsanganana dia mitondra antsika amin'ny kilometatra maro an'ny toeram-pitrandrahana izay ahitantsika ireo fitaovana, efitrano ary farihy ambanin'ny tany, fa ny zavatra tsy mampino dia ny manatona trano fiangonana ambanin'ny tany any St. Kinga, miaraka amin'ny haingo vita amin'ny sira.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Mandehana mankany Krakow, inona no ho hitanao ao an-tanàna
Toeram-pisakafoanana tsara indrindra ao amin'ny Times Square